भाषणमा बितेका सरकारका आठ महिना
सरकारले आठौं महिना पूरा गरेको छ  । तर सामान्य रुपले छैठौं महिनामा त्यो दिनसम्मका उपलब्धि भनी देखाइने विवरणहरु यो पटक आएन । हो, पाँचौंं महिनामा चाहिँ त्यस्तो देखाइएको थियोे । त्यसपछिका तीन महिना यो समयमा पनि केही केही त भएका थिए होलान् नै तर सरकार आफैंले त्यसलाई देखाउन लायक मानेन । केरुङ–काठमाडौं रेलको बाटो, पानीजहाज र चीनसँग पारवहन सम्झौता जस्ता कुरामा आठ महिनापछि थाहा भयो जनताले केही पनि पाएका रहेनछन् यो बेलासम्म । न घर घरमा ग्यास आयो । न मेलम्चीको पानी आयो । न भाउ बेसाहा सस्तियो । न स्वास्थ्यमा सुधार भयो । न बालबच्चाको शिक्षाको उचित व्यवस्थापन नै भयो । अर्थात आठ महिना यसै बित्यो जसरी पहिले बित्ने गरेको थियो । यो समयमा नै पर्यवेक्षकले भन्न थाले पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार बनाओस् कि सामान्य बहुमतका साथ, यो कुराले फरक पर्दो रहेनछ  । आठ महिना पहिले ज–जसको मनमा प्रम ओलीले अब देशलाई समृद्धिको बाटोमा हाँक्ने नै भए भन्ने विश्वास पलाएको थियो, त्यो विश्वास वाग्मतीको फोहोर पानी जस्तो भयो । टिप्पणीकारहरुका शब्दलाई उधारो लिने हो भने अहिलेको सरकार र वाग्मतीमा खासै फरक छैन । वाग्मती कहिले सफा हुन्छिन् ? कसैले भन्न सक्दैन । सरकारले कहिलेसम्म सुशासन दिन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन । जुन नदीमा पानी हुँदैन, त्यो नदीको रुपान्तरण डुंगडुंग गन्हाउने नालामा हुन्छ । जुन सरकारले सुशासन दिन सक्दैन त्यो सरकार भ्रष्टाचारमा गाडिएको हुन्छ । वर्तमान सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, शाखा, प्रशाखा कुनै एक ठाउँ मात्र पनि यस्तो छैन जहाँ विना घूस काम हुन्छ । एसियाली विकास बैंकको विशाल बजेट र प्रयत्नका बाबजुद वाग्मती सफा हुन सकेकी छैनन् भने किन ? अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । वाग्मतीको नाममा धेरैले नयाँ–नयाँ ‘फिल्ड ज्याकेट’ लगाए, घरको तला थपे, छोराछोरीको भविष्य बनाउन विदेश पठाए । वाग्मती सफाइ अभियानका अभियन्ताहरु राजदूत बने । एडीबीले कति अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई कन्सल्टेन्ट राख्यो । तै पनि, वाग्मतीमा माखो मरेन । हालत यस्तो छ, अहिलेसम्म निर्माण भएका संरचना खण्डहरमा परिणत हुँदैछन् ।
यो आठ महिनामा दुई तिहाइको सरकारले न त कुनै योजना सुरु गर्न सकेको छ, न त भएका योजनालाई नै गतिशील बनाउन सकेको छ । अघिल्लो सरकारले नेपालले आफैं बनाउने भनेको बूढी गण्डकी आयोजनाको निर्णय उल्टाएर फेरी चिनियाँ कम्पनीलाई दियो । मेलम्चीको पानी अहिलेसम्म काठमाडौं आउन सकेको छैन । तामाकोशी विद्युत् आयोजनाको लक्ष्य पछाडि सर्दैछ भने अरु राष्ट्रिय महत्वको भनिएका आयोजनाहरु अलमलमा छन् । यी भनेका नियमित प्रक्रियाजस्तै भयो । बरु उल्टो बूढी गण्डकीमा उठेका प्रश्नहरु निरुत्तरित नै रहे । त्यसमा झण्डै खर्बकै तहमा हुनेगरी भ्रष्टाचारको योजना बनेको आरोप लागेको छ । सरकार कस्तो भने आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डनसमेत गर्न नसक्ने भयो यो अवधिमा । सरकारका भनाइभन्दा जे कुरा हुनुपर्ने हो त्यो भएन र जे नहुनुपर्ने थियो त्योचाहिँ भई नै रहेको छ जस्तो प्रदेश सरकारहरु अलमलमा देखिएका छन् । एउटै पार्टीका भए पनि केन्द्रीय सरकारसँग प्रादेशिक सरकार विवादमा छन् । यो विवादलाई सुल्झाउनु जरुरी छ । तर, संघीय सरकार प्रादेशिक प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नचाहिँ रहेको छैन । उसका लागि प्रदेश नै घाँडो भएको छ । केही दिनअघि मात्रै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको दुई दिने भेलाले केन्द्रले आफूलाई बाँधेको आरोप लगाए ।
यता प्रदेशलाई स्थानीय सरकारबाट आरोप लगाई रहिएको छ, आफ्ना काममा बाधा पारेको भन्दै । केन्द्रले त मुख्यमन्त्रीहरुको भेलालाई छुट्टै राज्यजस्तो ठानेको भनी आरोप नै लगायो । त्यहीबीचमा मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नसमेत नपाएका समाचारहरु आइरहे । अरु घटनाले पनि केन्द्र र प्रदेशमा केही मनमुटाव रहेका बताउँछन् जस्तो प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने प्रदेश परिषद्को बैठक नै भएन । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले चारवटा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ । परिषद् संवैधानिक व्यवस्था हो भने प्रदेशसभाको सम्बोधन त्यस्तो होइन । यसले नै देखाउँछ यी निकायबीचमा कतै न कतै मनमुटाव छन् । राजनीतिक पद्धतिमा जनताको सर्वोच्चता रहने गणतन्त्र घोषणा भएको एघारौं वर्षमा छौं हामी यतिखेर । २०६५ जेठ १४ गते यस्तो घोषणा भएको थियो । यसले देशका नागरिकभन्दा माथि कोही हुँदैनन् भन्ने बुझाउँछ । त्यस्तो सर्वोच्च पदमा जो नागरिक पुग्छ त्यो पनि आवधिक निर्वाचनबाट मात्र तय हुने हो । यस्तो व्यवस्था भएको संविधान जारी भएको ३ असोजदेखि तीन वर्ष पूरा भयो । यो तीन वर्षकै बीचमा यसले प्रस्ताव गरेका तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । स्थानीय सरकार बनेको डेढ वर्ष बित्यो भने संघ र प्रदेश सरकारले पौने वर्ष पार गर्दैछन्  । यसको अर्थ हो संवैधानिक रुपले देशले गति लियो । केही साना–तिनाबाहेक संविधानले पकिल्पना गरेका सबै निकाय खडा भए । यो एउटा उपलब्धि हो प्रस्तावका रुपमा, तर मूल कुरा हो निकाय त खडा भए तर तिनले कस्तो पाइला चाल्दैछन् भन्नेमा समग्र कुरा निर्भर हुन्छ ।
यतिखेर देशको नारा वा भनौं सपना हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने । तर यो समयमा यी सपना पूरा गर्नेतर्फ के कस्ता कामहरु भए भन्ने आम जनताले खोजेका कुरा हुन् । यसबीच कुनै पनि तहको सरकारले न त समृद्धिको दिशानिर्देश हुने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याए, न त समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालनको विषयमा व्यवस्थित बहसको थालनी नै भयो  । समृद्धि रातारात सम्भव हुने विषय होइन भन्ने जानेका जनता जिम्मेवार नेताको पुरानै भाषण, सोच र शैलीले देश समृद्धिको दिशाउन्मुख नभएकोमा निराश हुँदै गएका छन् । सबभन्दा खतराको विषय पनि यही हो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र जता हेरे पनि कुरामा भन्दा काममा खासै गन्तव्य निर्धारण भएको अवस्था छैन, देखिएन  । केही पहिले प्रधानमन्त्रीबाट सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भएको छ अरिँगाल भएर आक्रमण गर्न कार्यकर्ता पंक्तिमाझ आह्वान भयो । आक्रमण त गर्ने तर कहाँ भनी कार्यकर्ताले नै सोधे । हामी किन अरिँगाल हुन सकेनौं भनी त्यो पंक्तिबाट त्यसबेला यतिधेरै प्रष्टीकरण आए जसका कारण प्रधानमन्त्रीले नै अरिँगाल छाडेर मौरी हुन अर्को आह्वान गर्नुपर्ने भयो । अहिलेको स्थिति भनेको केन्द्र र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार रहेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थालाई अवसरमा बदल्नु पर्नेमा उल्टो भएको देखियो ।
यहीनेर यदि यी ठाउँमा विभिन्न दलका सरकार रहेका भए एक अर्काप्रतिको सहयोग र सद्भाव कस्तो हुने रहेछ भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ भएको छ अहिले । सात प्रदेशमध्ये सातवटैमा केन्द्रको सत्तारुढ दलकै सरकार छन् । यस्तो अवसर बिरलै मात्र आउँछन् कुनै पनि यस्तो संघीय शासन भएका देशमा । नेपालमा यो पहिलो प्रयोग हो तर अवसरचाहिं एक प्रकारले दुर्लभ जस्तै रह्यो । यसको समुचित व्यवस्थापन गरे वास्तवमा नै देखाइएका सपनाहरु परिणाममा प्रकट हुन थाल्थे । प्रदेश मात्र होइन स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्रीय सत्ता चलाइरहेको दलकै वर्चस्व छ । यो भनेको केन्द्रदेखि गाउँसम्म काम गर्न अत्यन्त सहज हुने अवस्था हो । त्यसो हो भने परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी र समृद्धितर्फको गन्तव्य पहिचान हुनेगरी किन काम भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । जब यी निकाय खडा भए त्यसबेला प्रायः अपवादबाहेक सबैले नै आफू नमुना बन्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला बताइएअनुसार केन्द्रीय सरकार पनि नमुनाकै हुनेछ र प्रदेश सरकार पनि । यसमा गाउँ र नगर छुट्ने कुरै भएन । यस्तो घोषणाले के बुझायो भने वास्तवमा नै देश नमुनाकै बन्नेछ ।
आफ्नो क्षेत्रलाई सबैले नमुना बनाए भने आखिरमा त देश नै नमुनाको बन्ने हो । समृद्धिका लागि संघीय गणतन्त्र विश्वमै उत्कृष्ट ठानिएको व्यवस्था हो । जसमा धेरै जनताले सहभागी हुने अवसर पाउँछन् । जसभित्र भिन्न संघीय एकाइबीच राम्रो गर्ने होडबाजी र प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा सचेतना र क्रियाशीलता बढाउँछ । त्यसमाथि संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा संघीय इकाइ चल्नुपर्ने र समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने मार्गदर्शनसहित समृद्धिको सही दिशानिर्देश गरेको छ । तर यो संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यसको परिपालन त आखिरमा जहाँ जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले नै गर्ने हो । के त्यस्तो भएको छ त ? उत्तर सकारात्मक छैनन् नै । बरु संविधानको परिपालनातर्फ नै प्रश्न उठे यो छोटो समयमा ।
संविधानको भावना हो दलहरू मिलेर मात्र समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ र त्यसले गति लिन्छ भन्ने । संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता रहने धारा २८४ को व्यवस्था छ । यसबाहेक प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको रहनुपर्ने धारा ९२ (२) को संवैधानिक व्यवस्था लागू भएको छैन । संघीय सरकारले नेपालभर लागू हुनेगरी कानुन बनाउन सक्ने धारा २३१ को व्यवस्था र संघका प्रधानमन्त्रीसमेतको अध्यक्षतामा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठित अन्तरप्रदेश परिषद्को धारा २३४ को प्रावधानमार्फत संघलाई संविधानले सुम्पेको अभिभावकत्वको भूमिका कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । केन्द्र र प्रदेशबीच एक प्रकारले विवाद त देखिई नै सकियो पोखराको भेलाबाट । केही पहिले डाकिएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक स्थगित भएको, कहिले बस्ने भन्ने सङ्केत हालसम्म नपाइएको र मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएको आदिजस्ता सार्वजनिक भएका समाचारहरुले यतिबेला पनि समृद्धिको यात्राभन्दा संवैधानिक पक्ष मै अन्योल रहेको अवस्था प्रकट हुन निश्चय नै सुखद होइन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको दलकै स्थायी सदस्य हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीहरु तर पनि यस्तो बेला यस्तो विवाद हुन्छ भने यसले गन्तव्यलाई फराकिलो बनाउँदैन । जव गन्तव्य नै सङ्कुचनमा पर्छ भने पहिले आफैंले घोषणा गरेका नमुना बन्ने घोषणा कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।